आफन्तले छोडेर हिँडेपछि अस्पतालमा भर्ना भएका ७६ वर्षका वृद्ध बिचल्लीमा « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७६, सोमबार २१:२४
कोहलपुर, २५ कात्तिक । बाँकेका एक वृद्ध कोहलपुर स्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा अलपत्र परेका छन् । दाहिने खुट्टा भाँचिएर अस्पतालमा भर्ना भएका वृद्ध अलपत्र परेका हुन् । अस्पतालमा भर्ना गर्न ल्याएका आफन्तले छोडेर गएपछि अलपत्र परेका हुन् । उनको नाम अस्पतालमा भर्ना गर्ने समयमा भिम ब खत्री उल्लेख गरिएको छ । ७६ वर्षका उनको ठेगाना राप्तिसोनारी वडा. न. २ कचनापुर रहेको मेडिकल कलेजले जनाएको छ ।
आफन्त बेपत्ता भएपछि उनको रेखदेख गर्ने ब्यक्ति समेत अस्पतालमा कोही छैन । खुट्टा भाँचिएका कारण हिडडुल समेत गर्न नसक्ने भएपछि समस्या परेको छ । उनको यस्तो अवस्था देखेपछि मेडिकल कलेजका केही कर्मचारीहरुले फेसवुक मार्फत वृद्धलाई चिन्नेहरुले सहयोग गर्न भन्दै स्टाटस राखेका छन् । कोहलपुरका युवा नेता तथा समाजसेवी कुश्माखर बस्यालले फेसवुकमा तस्बिर सहित स्टाटस राखेर उनका आफन्तसंग सम्पर्क गराइदिन आग्रह गरेका छन् । उनले स्टाटसमा लेखेका छन्
भिम ब। खत्री ७६ वर्ष ठेगानास्( राप्तिसोनारी वडा।न। २ कचनापुर
यी बुढा बुवालाई चिन्नुहुन्छ भने नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा सम्पर्क गराईदिनुहोला । हिजो दिउँसो १२ बजेबाट उहाँलाई उहाँको आफन्तले छाडेर गएका छन । बुवाको दाहिना खुट्टा भाचिएको छउनको स्टाटसमा वृद्धलाई चिन्नेहरुले कमेन्ट गर्दै उनका कोही आफन्त नभएको उल्लेख गरेका छन् । श्रीमती पनि क्यान्सर लागेर केही समय अघि बितेको र छोराबुहारी देश बाहिर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
हिजो दिउँसो १२ बजेबाट आफन्तले छोडेर गएका कारण अलपत्र परेका वृद्धका आफन्तको सम्पर्कमा ल्याउने कोशिष कर्मचारीहरुले गरेका छन् । छोराले सबै सम्पत्ती बेचेर परिवार सहित भारत गएको भन्दै केही चिनेकाहरुले कमेन्टमा उल्लेख गरेका छन् ।
२५ श्रावण २०७७, आईतवार ०९:४०